Xubin Xildhibaanada Golahii Hore Ee Wakiilada Somaliland Ugu Fir-fircoonaa Oo Geeriyooday | Araweelo News Network (Archive) -
Xubin Xildhibaanada Golahii Hore Ee Wakiilada Somaliland Ugu Fir-fircoonaa Oo Geeriyooday
Adis-ababa(ANN) Alla hawnaxariistee waxa maanta ku geeriyooday cusbitaal ku yaal dalka Ethiopia Marxuum Maxamuud Axmed Cali oo lagu naanaysi jiray (Af-qalooc), kaas oo ahaa Aqoonyahan hore uga tirsanaan jiray golihii wakiilada Somaliland ee hore, isla markaana ka mid ahaa xubnaha
ugu fir-fircoonaa mudanayaashii xiligaa ee golaha.
Maraxuum Maxamuud Axmed Cali oo dhowaan dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu mudo dhawr sannadood ah ku maqnaa dalka Britain, ayaa dhowaan la geeyay cusbitaal dalka Ethiopia ah. Iyadoo xaalad caafimaad daro haleeshay, balse waxa uu ku geeriyooday halkaa marxuumku. Waxaana maalmaha soo socda lagu aasayaa magaalada Hargeysa.
Alla hawnaxriistee Marxuum Maxamuud waxa uu ahaa xubnihii golaha wakiilada ee hore ugu fir-fircoonaa, wuxuuna badhtimihii sannadkii 2001 hormood u ahaa koox mudanayaal dhawr iyo sodon gaadhayay oo Madaxweynihii hore Marxuum Cigaal kusoo oogay mooshin ku saabsanaa khiyaamo qaran iyo maamuus ka xayuubin , taas oo markii doodeedu mudo ka socotay golihii wakiilada ee xiligaa cod loo qaaday. Sidaana lagaga guulaystay kooxdii mooshinka wadatay oo codkii loo baahnaa ka waayay golaha. Sida ka muuqata sawirka oo ah toban sannadood ka hor Gudoomiye xigeenkii koowaad ee xilgaa golaha C/qaadir jirde oo gudoominayay doodii mooshinkaa ayaa ka dalbaday labada kooxood ee xildhibaanadu inay laba xubnood oo metela soo saaraan. Ka hor intii aan codka loo qaadin mooshina, waxaana labada dhinac soo saareen labada xildhibaan ee taagan oo kala ah Alla hawnaxariistee Marxuum Beydaani iyo Marxuumka hada geeriyooday Maxamuud Axmed Cali. Iyadoo taariikh nololeedkii marxuumka aanu dib idiinku soo qori doono intii suurta gal ah.
Sawirakan waxa uu ka mid yahay aarkiifiyada shebekada wararka ee Araweelonews. Waxaana xiligaa qaaday Tafaftiraha Araweelonews Carraale M. Jama .
Shebekada Araweelonews waxay taci tiiraanyo leh u diraysaa qoyskii , qaraabadii, Ehelkii iyo intii aqoonta u lahayd marxuumka, waxayna illaahay uga baryayaan inuu jannadii fardawsa ka waraabiyo qoyskii iyo asxaabtii uu ka baxayna samir iyo iimaan ka siiyo. Inaa lilaah wa inaa ilayhu raajiciin.